Hetsiky ny mpianatra : nisy fisamborana sy daroka (+vidéos) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Hetsiky ny mpianatra : nisy fisamborana sy daroka (+vidéos)
Miha-mafy hatrany ny hetsiky ny mpianatra eto Antananarivo raha ny fahitana azy. Manampy ny fitakian’ireo mpampianatra izy ireo mba ahafahany miverina mianatra haingana. Androany ary raha niezaka naneho hevitra teny Anosy sy ny manodidina izy ireo dia nifanehitra tamin’ny EMMOREG. Raikitra ary ny fifanenjehana ary dia niafara tamin’ny fisamborana mpianatra avy any amin’ny LTPS Alarobia iray. Fisamborana izay niainga tamin’ny tondro molotra raha ny filazan’ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana.
Sary mpianatra teny Anosy
Hita mbola ao anatin’ny heriny tanteraka ireto mpianatra ireto ary manana ny fahasahiana mandray andraikitra rehefa ny hoaviny no voatohitohina. Na dia niezaka naneho fampihorohoroana niaraka amin’ny saron-tava sy ny fiadiana mahery vaika aza ny EMMOREG dia sahin’ireo tanora ny nifanazava tamin’izy ireo sy nilaza ny fitakiany imasoimaso.